NewsFrames ho an’ny GV · Global Voices teny Malagasy
NewsFrames ho an'ny GV
Voadika ny 10 Jolay 2019 3:06 GMT
Miarahaba ny fiarahamonina GV! Misaotra betsaka tamin'ny teny fampidirana, ry Ivan, ary faly aho manatevin-daharana ny Global Voices ary manatanteraka ity tetikasa ity.
Amin'ity mihitsan-dravina ity, ankoatra ny fizàrana amin'ny Global Voices sy ny fiaraha-miasa efa an-dalana miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka ao amin'ny MediaCloud, dia manana zavatra maromaro miandry isika: fihaonana ao amin'ny MIT amin'ity volana ity mba hanombohana dingana nodinihana momba ny famoronana rindrambaiko, izay manome antoka fa mahavita ny fampanantenany ho an'ny Global Voices ny NewsFrames.
Raha ny marina, izany indrindra no hizoranao, satria tsy ho vita ny hahombiazan'ny tetikasa raha tsy misy zavatra ilainao, ny fomba fijerinao, ary ny vinavinanao. Izany no mahatonga anay hipaka atsy ho atsy any amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo liana mba hanatevin-daharana ny ekipa kely mpanao domberina kely sy andrana mialoha. Miasa amin'ny fomba hitazonana ny olona rehetra haharaka ny fandrosoana sy ny fivoaran'ny NewsFrames ihany koa izahay, noho izany, aza miala.
Miandrandra fatratra hihaona amin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina sy hahatakatra bebe kokoa izay manosika sy mahaliana anao aho. Aza misalasala mifandray amiko mivantana raha manana hevitra na fanontaniana ianao, na valio ao amin'ny fanamarihana amin'ity lahatsoratra ity.